कालिन्चोकमा चौँरी महोत्सवको तयारी पूरा, चौँरीपालक कृषकहरुद्वारा विरोध ! - Awajonline Online Newspaper
कालिन्चोकमा चौँरी महोत्सवको तयारी पूरा, चौँरीपालक कृषकहरुद्वारा विरोध !
आवाज संवाददाता २१ श्रावण २०७४, शनिबार
दोलखा, २१ साउन
कालिन्चोक क्षेत्रमा चौँरी महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ तर कृषकहरुले प्रदशनीमा चौँरी नलैजाने घोषणा गरेपछि महोत्सव विवादमा परेको छ । महोत्सवलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा वलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
चौँरी महोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा किसानहरुले महोत्सवमा चौँरी प्रर्दशनीमा नलाने घोषणा गरेका छन् । कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. १ साविक कालिञ्चोक गाविसका ८ जना चौँरीपालक किसानहरुले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनीमा चौँरी नलाने घोषणा गरेका हुन् ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाले चौँरी महोत्सव आयोजना गर्न लागे तापनि आफूहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै उनीहरुले आफ्ना चौँरी नलाने घोषणा गरेका हुन् । किसानहरुले महोत्सवमा आउने प्रमुख अतिथि, अतिथिहरुका लागि पनि ‘अप्ठ्यारो बाटोमा कष्ट नगर्न’ समेत आव्हान गरेका छन् ।
साविक कालिञ्चोक गाविसका वेदबहादुर पाख्रिन, पदमबहादुर पाख्रिन, तिर्थ मगर, दिलबहादुर तमाङ, लालबहादुर तमाङ, ढालबहादुर तमाङ, राजबीर तमाङ र भेडापालक किसान चतुरमान तमाङले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कालिञ्चोक चौँरी महोत्सवमा मुख्यगरी यिनै किसानहरुको चौँरी र भेडा प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी थियो ।
कालिञ्चोकका एक चौँरीपालक किसानले यी किसानहरुले चौँरी प्रदर्शनीमा नराख्दा महोत्सव नै खल्लो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘मुख्य चौँरी नै घ्याङडाँडा, टुट्वान क्षेत्रमा भएका गोठहरु हुन्’ उनले भने ‘यिनै किसानहरुका स्टल राख्ने तयारी थियो, अहिले स्टल राख्न पनि समस्या हुन सक्छ ।’
बोच, सुस्पा क्षेत्रका किसानले पाल्ने चौँरी कुरीमा छन् । ती सबै गरी करिब एक सयको संख्यामा छन् । ती चौँरी घ्याङडाँडा पु¥याउन टाढा पर्छ । अन्तिम विकल्पको रुपमा तिनै चौँरी लगेर समेत प्रर्दशनीमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ ।
महोत्सव आयोजनास्थल घ्याङडाँडा समेत स्थानीयको विवादमा छ । कालिञ्चोक गाउँपालिकाले त्यसलाई वडा नं. ६ लापिलाङ भएको प्रचार गरेको छ । तर साविक कालिञ्चोक गाविसबासीले त्यो आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेका छन् ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठकले सबै चौँरीपालक किसानहरुसँग समन्वय गरेर स्टल समेत राख्ने निर्णय भएको बताइन् । किसानहरुले चौँरी प्रर्दशनीमा नल्याउने भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै सबैले महोत्सवमा चौँरी ल्याउने विश्वास भएको बताइन् ।
महोत्सव तयारी पूरा भयो
धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनका लागि प्रसिद्ध कालिञ्चोकमा गर्न लागिएको चौँरी महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिकाको आयोजनामा कालिञ्चोकको घ्याङडाँडामा आइतबार र सोमबार हुने महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनकुमार थामीले जानकारी दिए ।
महोत्सव तयारीका लागि कालिञ्चोक गाउँपालिकाको टोली नै कुरी पुगेको छ । दोलखाका स्थानीय विकास अधिकारी शंकर नेपाल सहितको टोली शुक्रबार कालिञ्चोक पुगेर तयारीको स्थिति मिलाएर फर्केको छ । दोलखा क्षेत्र नं. २ का सांसद सहितको टोली पनि शनिबारै थप तयारीका लागि कालिञ्चोक पुगेको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाले महोत्सव उद्घाटनका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आउने चर्चा छ । ३ हजार ६ मिटर उचाइमा हुने चौँरी महोत्सवमा ३ सय बढी चौँरीको प्रदर्शनी, याक, चौँरीका परिकार प्रर्दशनीमा राख्ने तयारी भएको कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठकले जानकारी दिइन् । महोत्सवमा चौँरीबाट उत्पादन हुने डेरीजन्य र डेरी बाहेकका उत्पादनलाई महत्वका साथ राखिने उनले बताइन् ।
जनै पूर्णिमाको दिन विशेष भुमे पूजा गरेर गोठ तलतिर झार्ने दिन भएकाले पनि जनै पूर्णिमा आसपासमा महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले बताए । कालिञ्चोक क्षेत्रमा शेर्पा, थामी र तामाङ जातिले चौँरी पाल्दैआएका छन् । जनैपूर्णिमाको अवसरमा कालिञ्चोकमा मेला समेत लाग्ने गरेको छ ।
महोत्सवमा कालिञ्चोक क्षेत्रमा करिब २ सय चौँरी सहभागी हुने जिल्ला पशु कार्यालयका डा. रामचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । कालिञ्चोक आसपासको खर्कहरुमा ३ सयभन्दा बढी चौँरी रहेको उनले बताए । महोत्सवमा चौँरीजन्य उत्पादन रहेको ३ वटा, जडिबुटीको एक, चौँरीको आहाराको एक र भेडाजन्य परम्परागत उत्पादनको एउटा गरी ६ वटा स्टल राखिने बताए ।
महोत्सवका लागि कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ६ लापिलाङका वडाध्यक्ष मानसिं थामीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति बनाएको छ । मूल आयोजक समितिको सदस्यहरुमा कालिञ्चोक गाउँपालिकाका ९ वटै वडा अध्यक्षहरु रहेका छन् । त्यस्तैगरी आर्थिक उपसमिति, प्रचारप्रसार उपसमिति, झाँकी व्यवस्थापन, आवास तथा खाना व्यवस्थापन र शिविर व्यवस्थापन समिति लगायतका समिति बनाएको छ ।